Fifaninanana nandraisana mpianatra zandary : nanokatra fanadihadiana fa miahiahy kolikoly ny Bianco | NewsMada
Fifaninanana nandraisana mpianatra zandary : nanokatra fanadihadiana fa miahiahy kolikoly ny Bianco
Ahina ho nisy kolikoly ny fifaninanana fandraisana mpianatra zandary farany teo. Tompon’andraikitra sasany eo anivon’ny zandarimariam-pirenena ihany no ahiahin’ny Bianco, izay efa eo am-panaovana fanadihadiana mikasika izany, amin’izao fotoana izao.
Vita soa aman-tsara ny fifaninanana nandraisana mpianatra zandary farany teo. Fifaninanana izay natrehin’ny Birao mahaleo tena miady amin’ny kolikoly (Bianco) ny fanomanana sy ny fikarakarana azy. Tsiahivina fa nahatratra 1.200 ireo mpiadina afaka ka voaray tamin’io fanadinana io. Raha nizotra tsara tahaka izany anefa ny fanomanana sy ny fizotry ny fanadinana, tsy araka izay kosa ny nitranga taoriana, izany hoe, nony efa tena nanomboka ny fiofanana tany amin’ny sekoly.
Nandeha mantsy ny feo ny amin’ny fanoloana ireo mpianatra izay efa voasoratra tao anaty lisitra fa afaka soa aman-tsara tamin’io fifaninanana io. Fanoloana tsy mazava, ka nampiteraka ahiahy. Tsikaritra koa fa nitombo, tsy araka ny voasoritra tany am-piandohana, ny isan’ireo mpianatra ho zandary nanomboka ny fiofanana.
Izay ahiahy izay no niaingan’ny fanokafana fanadihadiana nataon’ny Bianco, taorian’ny fitarainana voarain’izy ireo. Mipetraka, araka izany, ny ahiahy ny amin’ny fisian’ny kolikoly tamin’iny fifaninanana nandraisana mpianatra zandary farany teo iny. Voalaza fa hoe « tompon’andraikitra sasany eo anivon’ny zandarimariam-pirenena ihany ny iantefan’ny ahiahy amin’izany ».
Niova tampoka am-pandehanana
Raha tsorina ny fisehony, nisy ireo mpiadina efa voasoratra fa afaka ara-dalàna tamin’ny fifaninanana. Nony efa tena nanomboka anefa ny fiofanana, nisy tamin’ireo indray no nosoloina, izany hoe, nisy lisitra vaovao. Vao mainka aza nitombo, na nihoatra, tsy araka ny tokony ho izy ireo voalaza fa voaray.
Tsy voahaja, araka izany, ny fitsipika na ny lalàna manan-kery mifehy ny fifaninanana amin’ny ankapobeny, ny lalàna momba ny lisitra fiandry (liste d’attente).
Araka ny voalaza etsy ambony, efa eo am-panaovana ny fanadihadiana rehetra mikasika ity «Raharahan-kolikoly» momba ny fifaninanana fandraisana mpianatra ho zandary ity ny Bianco. Ho hita eo ny vokatr’izany fanadihadiana izany, raha tsy hoe, hisy indray angaha ny mety ho sakantsakana amin’ny fanatanterahana izany.
Raha toa ka tena mitombina tokoa ny fisian’io, hampitombo indray ny lazan’ny zandarimariam-pirenena, izay anisan’ireo sampandraharaham-panjakana lohalaharana hatrany amin’ny fanaovana kolikoly ity raharaha ity.
Nidoboka am-ponja ao Manakara: “Inspecteur de domaine” nanao amboletra ny barazin’ny zandary 05/06/2020
Fonjan’Antanimora: voafonja iray voamarina fa mitondra ny tsimokaretina Covid-19 05/06/2020
Les grands plans de relance… Et un nouvel IEM ? 05/06/2020
Épidémie dans le Sud Et maintenant le paludisme 05/06/2020
Le travail a repris. La reprise est absente. Episode 3 05/06/2020